सुशान्तको विवाह यी युवतीसँग हुन लागेको थियो तर…. – Online Nepal Site
मुख्य पृष्ठ /International/सुशान्तको विवाह यी युवतीसँग हुन लागेको थियो तर….
काठमाडौं / केहिदिन अगाडि आ त्मह त्या गरेका बलिउड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत व्यक्गित जीवनलाई नयाँ मोडमा लाने तयारीमा थिए ।चलचित्र क्षेत्रमा विरासत बाहिरबाट आउका उनी आफ्नो असाधारण प्रदर्शनका कारण सबैको मन जितेका थिए । आफ्नो निजी जीवनका कारण प्रायः चर्चामा भइरहन्थे ।
उनको आकस्मिक नि धनले सबैलाई स्त’ब्ध बनाएको छ । आखिर विवाह गरेर नयाँ जीवन जिउने तयारीमा रहेका उनले किन आ त्म ह त्या गरे ? सन् २०२० को नोभेम्बर महिनामा विवाहको गाँठो बाँध्न तयार रहेको खुलेको छ । विवाह गर्न तयार रहेको विषयलाई सुशान्तको भाईले खुलासा गरेका थिए । यद्यपि उनले युवतीको नाम भने सार्वजनिक गरेनन् ।
युवतीको नाम नखुलेपनि नायिका रिया चक्रवर्तीको नाम सुशान्त सित जोडिन पगेको थियो । उनीहरु दूवै जना बंड्रा स्थित घर हेरिरहेका विषय सम्पत्ति विक्रेताले खुलाएका छन् । सम्पत्ति विक्रेताले भने, “ती दुईजना एक साथ घर खोजिरहेका थिए । यस भन्दा बढि मलाई केहीै थाहाँ छैन ।” भाडा सम्बन्धी त्यस्ता कुनै मु’द्दा नभइ समस्या भनेको उहाँको लेट नाइट पार्टीहरू रहेको सम्पत्ती विक्रेताले जनाए ।
रिया यो भन्दा पहिले, एसएसआर बसोबास गर्थिन् । त्यो समाजले पनि उसको लेट नाइट पार्टीहरूको गुनासो गरिहरेको उनले बताए । सुशांत सिंह राजपूतसँग बस्न रियाले बंड्रमा घर खोजेको स्वयम रियाले सम्पत्ती विक्रेताले जनाए । हामी चाँडै नै बिहे गर्नेछौ,’ भन्दै सम्पत्ती विक्रेतालाई रियाले स्पष्ट पारिन् । रियापनि सुशान्तको निधन पश्चात अस्पताल पुगीन् ।